”Waxaan aaminsan ahay in DEEQA la dulminayo!” – Su’aalo taagan | Hadalsame Media
Home Wararka ”Waxaan aaminsan ahay in DEEQA la dulminayo!” – Su’aalo taagan
”Waxaan aaminsan ahay in DEEQA la dulminayo!” – Su’aalo taagan
(Gaalkacyo) 07 Luulyo 2019 – Waxaan Deeqa u arkaa DULMANE! Sababtoo ah maxaa loo kala gooyay warkii ay waday muuqaalka (video) laga duubay markay nuxurka sheekada bilowday illeen midka taliyahaba wa la dhamaystiree?
Su’aalaha Loo baahnaa in la weydiiyo gabadhan?
Imisay matalaysay nin ahaan? Maxaa ku Kalifay? Waxay sheegtay inay qof dumara & ilmaheeda ay bad baadinaysay, Qaabkee ayay u bad baadisay, ma in qof kale sharafkiisa iyadoo difaacaysa bay keeda ku tumatay?.
Maxaa loosoo qaban wayay dadka ay sheegtay inay bad baadinaysay oo loosoo Bandhigi waayay.
Alaabta xirsiyada & waxa duuduuban maxaa loo wayay waxay tahay.
Rag waawayn oo weriyaal ah hadana idaacado Agasimayaal ka ah & kuwo aqoon la bidayay markay leeyihiin naag baa ”naag ilmo ka dhashay” miyayna ogayn in dad caqli lihi ay warkooda arkayaan?!!
Waxaa Qoray: Cabdullaahi Yare
FG: Waxaa kale oo khusuusi ahaan khalad ah in gabadhan sawirradeeda lagu baahiyo meel kasta.
Previous articleWaxyaabo aynaan dadka xaq ugu lahayn, siiba waalidka! (Qayb ka mid ah Filinka “Fences”)
Next articleGOOGOOSKA: Brazil vs Peru 3-1, Algeria vs Guinea 3-0 (Brazil oo hanatay Coppa America)